I-Red Hat I-Single Sign On (i-SSO) igijima ku-Red Hat Virtualization | ITS
10 -Feb 2017
I-Red Hat I-Single Sign On (i-SSO) isebenza ku-Red Hat Virtualization
I-Red Hat iyaziwa kakhulu nge-Red Hat Enterprise Linux (RHEL) nokuthi ibe iphayona ekuqhubeni ukuthuthukiswa kwemithombo evulekile yomthombo. Esikhathini esiningi, ukuqhubekela phambili kwezinto eziphezulu kwenza kube ngokucacile izinto ze-Red Hat ezinikezela umsebenzi osebenzayo kwenye indawo emgqeni.
I-Red Hat Single Sign On (SSO) ukuze unikeze uhlaka oluqinisekisile oluqinisekisiwe lwezinto zokuvula zewebhu. Izicelo, ezifana ne-Red Hat SSO, zingathunyelwa ngokucacile ngendlela ehambisana nezigaba. I-Red Hat Ikhethele ukwamukela ifu eliyingxenye nengxenye yokuthumela i-Red Hat SSO imodeli, njengengxenye enkulu yomsebenzi ojwayelekile https://sso.redhat.com kulungiswa kwesinye sezikhungo zethu zedatha yenkampani. I-SSO futhi cishe zonke ezinye izinhlelo zokusebenza ziqhubeka zigijima phezulu kwe-Red Hat Virtualization.
Indaba yethu ngamalungiselelo endalo phezulu kwe-Red Hat Virtualization ibuyela emuva phakathi kwe-2010 lapho i-Red Hat IT iqondwa ngokuphelele i-Red Hat Virtualization ngenkathi isesezinhlobo zama-alpha zangaphambi kokukhipha. I-Red Hat Virtualization iye yaqala ngokucacile okuningi kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, kodwa enhliziyweni yayo, isalokhu i-KVM i-virtualization entsha enamandla.
Njengentuthuko eminingi, i-Red Hat isebenza ngezikhungo ezimbalwa zedatha ezitholakalayo. Lezi zinhlangano zihamba ukusuka kuma-rack 5-10 kuya kunani elikhulu lamamitha ayisithupha. Esizindeni ngasinye, sisebenza okungaphansi kweyodwa i-Red Hat Virtualization bunch (i-Data Center ngo-Red Hat Virtualization inkulumo). Lokhu kubandakanya ama-hypervisors e-RHEL kanye nesigaba samandla. Idatha engaphezulu ekuthumeni kwethu ingatholwa ekungeneni kwamaklayenti. Ngokusobala, izinombolo ezihlukahlukene zishintshile njengamanje sisebenza ngokuxuba kwe-Red Hat Virtualization 3.6 ne-Red Hat Virtualization 4.0.
Endaweni yethu yokudala eyisisekelo, sinezikhungo ezimbili zedatha ye-Red Hat Virtualization kanye nama-hubs wokuphatha. Lezi zisebenzise ukuhlukaniswa kwamanani nezibalo zamandla. Zonke izinhlelo zokusebenza zinezigaba ezifinyeleleka kakhulu ezihlukaniswe ngaphezu kwalababili abanomlenze wokuqapha ukunyakaza phakathi kokuhlelwa okunamandla / okunamandla noma okunamandla, okuhambisana nesicelo. Ngenxa ye-Red Hat SSO, i-database ye-MariaDB iyadingeka ukuphila kolunye uhlangothi kanye nempilo yokushisa ebusayo. Sisebenzelana nokushintsha kulokhu kuya kusetha okunamandla / okunamandla okusebenzisa i-Galera. Ama-hubs yesicelo se-Red Hat SSO aqinisekisiwe / ashukumisayo, anezimboni ezimbili kuzo zonke izikhungo zedatha ye-Red Hat Virtualization. Umsebenzi umthwalo ulungiswe phakathi kwazo zonke i-RH SSO hubs futhi zigcina isimo sesifunda esisebenzisa ukungena kwe-infinispan.
Ukunyakaza okuza ku-https: //sso.redhat.com kulungiswa yi-CDN futhi ekugcineni kuhoxisiwe yi-hubs yesicelo eyenziwe ku-Red Hat Virtualization noma ngamaqoqo e-RH SSO esinayo ku-AWS. Ngokuvamile, umsebenzi uhlinzekwa ngaphandle kwezikhungo zethu zedatha njengoba lawo ma-hubs asebenza kahle kakhulu. Sithole ukuthi i-Red Hat Virtualization VMs isebenza ngokujwayelekile ngezinga elilinganayo nezinhlaka zensimbi eziveziwe.
Izinzuzo ze-Red Hat I-Virtual Sign On Virtualization
Izinzuzo ze-Red Hat Virtualization ze-RH SSO ezidlula kakhulu ukusebenza kwe-VM. Singakwazi ukuhlela ngokushesha futhi ukuchitha ama-VM ngenxa ye-Red Hat Virtualization Command Line Interface (CLI) ne-API. Eqinisweni, engxenyeni eyedlule, ngingazakhela izinkomba ezintsha zibe izingxenye ezilinganayo ngosuku ngenxa ye "yombuthano", i-Red Hat Virtualization CLI futhi ukuba nezicelo zethu zitholwe ngokuphelele.
Ukuzwakala nokukwenziwa kwe-KVM emisha, kuhlanganiswe nokusetshenziswa kokuphatha nokuphepha kwe-Red Hat Virtualization imvume yokuhlukaniswa kwe-IT, isibonelo, i-Red Hat IT, ukuqonda isiqiniseko sokuthunyelwa okusheshayo nengqalasizinda ngenkathi kusetshenziswa izinsiza zokusebenza ezikhona. Ngaphezu kwalokho, i-https://sso.redhat.com inethonya eligcwele futhi livulekile isitaki se-Red Hat, sibonisa ukuzinikezela kwe-Red Hat ukuvula umthombo wemithombo emisha:
I-Red Hat Enterprise Linux
I-Red Hat I-Virtualization
I-Red Hat JBoss Enterprise Application Platform
I-Red Hat Satellite
Igama lemiklomelo yamafu i-Red Hat JBoss EAP yomqambi wokugcina we-Best Cloud Middleware we-2016-2017
I-RHCSA Yokuhlola Amathiphu - Indlela Yokudlula I-RHCSA Exam?